မန္တလေး ခေတ်ရေစီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » မန္တလေး ခေတ်ရေစီး
Posted by မောင်မန္တလေး on Dec 15, 2009 in Arts & Humanities, Business & Economics, Celebrity, Cultures, Entertainment, Music, Myanma News, Photography, Style & Beauty | 21 comments
ထွန်းထွန်းနဲ့ မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်မှ မော်ဒယ်များ
KOSE – Nice to meet you party at Mandalay Sedona (12-13-09 )
မန္တလေးမှာလည်း ဖက်ရှင်ရေစီးနဲ့အတူ ဖျော်ဖြေမှုပုံစံတွေပြောင်းလဲလာပါတယ်။ ယဉ်ကျေးလှပါတယ်ဆိုတဲ့ မန္တလေးမှာ ကာရာအိုကေဆိုင်တွေ၊ စင်တင်တေးဂီတဆိုင်တွေ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ပိုများလာပါတယ်။ မန္တလေးရဲ့ အရှေ့ပြင်နဲ့တောင်ပြင်မှာ ပိုပြီး များပြားတာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ ညခင်းအချိန်မှာ စည်ကားနေတယ်။ ရန်ကုန်မှာ စင်တင်တွေမလုပ်ရတော့ဘူးဆိုလို့ မန္တလေးကို လုပ်ငန်းပြောင်းလာကြတယ်လို့လဲ ဆိုကြတယ်။ မကြာခင်ကမှ မန္တလေးအထင်ကရဟိုတယ်ကြီးတွေမှာ တရားဝင်ဖွင့်ထားတဲ့ Night Club တွေကို ပိတ်ခံထိထားတယ်။ အနှိပ်ခန်းဆိုတာလည်း ပေါမှပေါလို့ ပြောရမလိုပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မန္တလေးဖက်ရှင်ရေစီးကြောင်း၊ ဖျော်ဖြေမှုပုံစံတွေပြောင်းလာတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့က မန္တလေးဆီဒိုးနားဟိုတယ်မှာ KOSE အလှကုန်က လုပ်တဲ့ Nice to Meet You ပါတီပွဲလေးတစ်ခုကျင်းပပြုလုပ်တယ်။ ဈေးရောင်းပွဲနဲ့အတူ နာမည်ကျော်အဆိုတော်တွေရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲကို ၀င်ခွင့်အခမဲ့ဖြစ်တယ်။ ပွဲလေးကတော့ တော်တော်လှပါတယ်။ ထွန်းထွန်း Example၊ သဇင်၊ ယုန်လေး၊ ဂျောက်ဂျက်၊ အေသင်ချိုဆွေတို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေ၊ ဒါရိုက်တာညိုမင်းလွင်ရဲ့ AREAX Entertainment ရဲ့ တင်ဆက်မှုတွေ၊ မိုးကုတ်ပေါက်ပေါက်ရဲ့ မော်ဒယ်လေးတွေရဲ့ သရုပ်ပြမှုတွေက စိတ်ဝင်စားစရာ ပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုတွေကို စာနဲ့ ပြန်ရေးပြချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုပုံဖော်ရေးရမှန်းမသိလို့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ပဲ မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မန္တလေး .. တော်တော်ကြီး တိုးတက်နေပါလား …..
Mg Mandalay has written 15 post in this Website..
View all posts by မောင်မန္တလေး →
ဓါတ်ပုံလေးတွေနဲ့ ပြလိုက်တော့ စာနဲ့တောင်ရေးဖို့ မလိုလောက်အောင်ပါပဲ။ ကျေးဇူးပါ။
တခုပါပဲ။ ထွန်းထွန်းက အကျီင်္ချွတ်ပြီး ဖျော်ဖြေတာပါ။ သူ့မှာ ဘယ်လောက်ရလို့ ဒီလိုဖျော်ဖြေလိုက်မှန်းမသိရပေမဲ့ “ဒီဂရီ”နဲ့တွက်ရင်တော့ တော်တော်မြင့်မြင့် သုံးလိုက်တာလို့ သဘောပေါက်မိပါတယ်။ သူက နိုင်ငံအဆင့်ရောက်နေတဲ့ ဆဲလီဘရိတ်တီလေ..။မန္တလေးပရိသတ်တွေ “တန်”သွားတာပေါ့..။
မြန်မာတစ်ယောက်အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနောက်တိုင်းဆန်မှုတွေမ၀င်လာစေချင်ပါဘူး။
အနုပညာရှင်တွေ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ပိုထိန်းသိမ်းသင့်တယ်ထင်တယ်။
သူ့ခေတ်နှင့် သူအခါ ၀တ်စားဒါကိုတော့ … မပြောချင်ပါဘူး…………
အဲလို မပေါ်တပေါ်ဝတ်နေ မဲ့အစား ဘာမှမဝတ်ပဲ သာနေလိုက်ပါလား။ဒါမျိုးကြ ဘာမှ မလုပ်ကြဘူး။အလကားနေ အီ အမှုနဲ့ ထောင်ပဲချကြလူဂျီးမင်းတို့..။
ko ngapock pyaw tar ko lat khan par talayan kg par tal de lo pa` pyaw tin tal
we are myanmar says:
ယဉ်ကျေးမှုမြို့တော် မန္တလေးကိုတော့ ချမ်းသာပေးကြပါကွယ်
be lo dwe pyit kon tar le .. please let the Mandalay asacultural city .. please ko tun tun . if u can not buyashit , i will buy for u please don’t do that like this. Please tell the girls to show their boo.. please show in out side of the city..
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာ… ရိုးရိုးဖျော်ဖြေတာ လူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းသွားလို့ ပိုပြီး အာရုံစိုက်ခံရအောင် လုပ်ကြည့်တာလား?
When I was young, I like to speak English so I practice with tourists and I showed around Mandalay, the real cultural city, the heart of Myanmar. At that time I took them the puppet-show, Anyeint show, Zart Pwe and gold leaf handicraft ….etc. They are very interested in because they have no entertainment like that. But now, If I have to show them like this Tun Tun & Models show, I think they shall take off their skirts and tell me ,” Please see and enjoy it.”
ထွန်းထွန်းရေ ခင်ဗျားကြီးကြောင့် မန္တလေးမြို့ ကြီး ပြောခံ/ရပြီဗျာ။ စိတ်ညစ်တယ် မန္တလေးမြို့ က ခင်ဗျားကြောင့် သိက္ခာကျတယ်ဗျာ။ နောက်အဲလိုမလုပ်ပါနဲ့ တော့ဗျာ……………
ရာဇ၀င်ထဲက မန္တလေး ကိုမှီဖို့ လိုပါသေးလား 21 ရာစု မန္တလေး ရေ
ရန်ကုန် ထက်တောင် ခေတ်မှီနေပါလား
အပေါ်အောက် အားလုံး ချွတ်ထားလိုက်ပါလားကွာ
သြော်…..ထွန်းထွန်းနဲ့မော်ဒယ်လေးများတို့……ကိုယ့်ကိုယ်ကို တော်တော်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ထင်နေကြတယ်ပေါ့………………………………………………..နာလည်းဒီကနေကြည့်ရတာ ကြည့်လိုပတယ်ကောင်း…..
TO BE UPDATE says:
ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ စုဝေးနေတဲ့ တို့မန္တလေးမှာတော့
မန္တလေးသားစစ်စစ်တွေကအေးတရ်၊ ၀တ်တာစားတာလဲရိုးရိုးလေး။ အာဖျံကွီးက မန္တလေးမှာ ကျောင်းတက်ဖူးတော့သိတရ်။ တချို.လူမျိုးခြားတွေပဲ ၀တ်တာစားတာလန်ထွက်တာ။
တောက်.. မော်ဒယ်လေးတွေလဲ ထွန်းထွန်းလို ဝတ်ရမှာ။ အဲဒီအခါကြရင် ထွန်းထွန်းက ပိုထူးခြားအောင် ဘောင်းဘီချွတ် ဆိုမလားမသိဘူးနော်။
တအားကိုမိုက်ရိုင်းလွန်းအားကြီးတယ် မန္တလေးသူတွေ ကော မန္တလေးသားတွေ ကော သိက္ခာကို အတုံးလိုက်အတစ်လိုက် ခွဲနေတာ အဲဒီလောက် အရှက်မရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေလည်းတစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး
KOSE ကလုပ်တဲ့ပွဲဆိုလည်း ဘာလို့ ဒီလိုဝတ်စားတာကို ခွင့်ပြုလဲ ။ အရှက်ကိုမရှိတဲ့ဟာတွေ ဟိုဟာတွေတောင် ဘီယာဆိုင်မှာ ဒီလောက်မပြရဲဘူး ။ လူမြင်ကွင်းမှာ တိရစ္ဆာန်နဲ့ နီးပါးပါလား ။ သိပ်သဒ္ဓါထက်သန်နေလဲ ဘာမှမ၀တ်ပဲဖျော်ဖြေလိုက် ။
not good လို့ပဲပြောချင်တယ်